WINE 5.9 inosvika kuunza zvinopfuura mazana matatu shanduko | Linux Vakapindwa muropa
WINE 5.9 inosvika kuunza inopfuura mazana matatu shanduko yekuvandudza «hapana emulator»
Vhiki mbiri mushure vhezheni yapfuura Uye kuenderera neayo mepu, iyo inonyanya kufarirwa Windows application "isiri-kutevedzera" software chirongwa chakaburitsa WINE 5.9. Sezvo zvavanowanzoita kwechinguva izvozvi kwavari kuburitsa vhezheni nyowani vhiki mbiri dzese, timu yekuvandudza yakangoratidzira mashoma mashoma maficha sekuchinja kukuru, asi gare gare tsamba yako inodzidzisa vanotaura zvakawanda.
Pakazara, WineHQ inoti vakagadzirisa 28 bugs, asi vaunza kusvika pamakumi matatu neshanu shanduko. Mazhinji acho akasainwa naAlexandre Julliard, ane makumi mashanu nemana, achiteverwa zvakanyanya nevane makumi mana nevasere vakaunzwa naZebediah Figura, iye "poleman" wemasvondo maviri apfuura. Pakati pezvakakurumbira zvinosimudzira, ivo vanotaura kufambira mberi kwakakosha muWineD54D Vulkan backend. Dzimwe dzese dzakasarudzika dzenhau dzavanotaura, chete 49 kusanganisa iyo iyo inotaura nezve dzakasiyana kururamisa, iwe unayo ivo mushure mekucheka.
WINE 5.9 inosimbisa
Kufambira mberi kukuru paWineD3D Vulkan backend.
Pakutanga rutsigiro rwekupatsanura dlls mu PE uye Unix zvikamu.
Tsigiro yekugadzira PDB mafaera kana uchivaka PE dlls.
Timestamp inogadziridza pane yakagovaniswa kernel mushandisi dhata.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 5.9 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune yekupedzisira link pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iro repamutemo reprojekti kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa munguva yemberi nekukurumidza pavanenge vagadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi zvakare Android uye macOS.
Kana, sepakutanga, pasina kushamisika, inotevera vhezheni ichave WINE 5.10. Iyo Chishanu chinotevera, Chikumi 6 uye pakati pezvinhu zvayo zvitsva, zvinotarisirwa kuti vacharamba vachivandudza iyo WineD3D Vulkan backend uye rutsigiro rwekugovanisa dlls muzvikamu zve PE uye Unix.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » WINE 5.9 inosvika kuunza inopfuura mazana matatu shanduko yekuvandudza «hapana emulator»